ဘုရင်ရှောလမုန်၏သတ္တုတွင်းများ (အပိုင်း ၁၉) - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2014-04 > ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 13) ၏မိုင်းများ
“ ငါကတိုက်လေယာဉ်တစ်ယောက်ပါ။ ငါသည်ဤမျက်စိ -for-an- မျက်စိပစ္စည်းပစ္စယယုံကြည်ပါတယ်။ ငါ့ပါးကိုလှည့်လိုက်တယ် နောက်ပြန်မလှည့်သူကိုငါလေးစားမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းကငါ့ခွေးကိုသတ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ကြောင်လေးကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးပါ။ ” ဒီစကားဟာရယ်စရာကောင်းပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံမိုဟာမက်အလီကဒီသဘောထားမျိုးကိုလူအများဝေမျှကြသည်။ မမျှတမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်ပျက်တတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိမ်လည်လှည့်ဖျားခံရသည်ဟုခံစားရသည် (အရှက်ရနေပုံရသည်) နှင့်လက်စားချေလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုငါတို့ခံစားရတဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားစေချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဖြစ်စေရန်စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မစီစဉ်နိုင်ပါ။ စကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်ငြင်းဆန်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏လက်စားချေခြင်းသည်လည်းချိုမြိန်လိမ့်မည်။
»Sprich nicht: „Ich will Böses vergelten!“ Harre des Herrn, der wird dir helfen« (Sprüche 20,22). Rache ist nicht die Antwort! Manchmal fordert uns Gott dazu auf, schwierige Dinge zu tun, nicht wahr? Bleiben Sie nicht bei Ärger und Rachegefühlen stehen, denn wir haben einen unbezahlbaren Schatz – eine lebensverändernde Wahrheit. „Harre des Herrn“. Lesen Sie nicht zu schnell über diese Worte hinweg. Meditieren Sie über diese Worte. Sie sind nicht nur ein Schlüssel im Umgang mit den Dingen, die in uns Schmerzen und Bitterkeit und Ärger hervorrufen, sondern stehen im Mittelpunkt unserer Beziehung mit Gott.
ဒါပေမယ့်ငါတို့လုံးဝမစောင့်ချင်ဘူး။ ကော်ဖီ၊ သွား၊ SMS နှင့်တွစ်တာခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုယခုချက်ချင်းပင်အလိုရှိသည်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ၊ တန်းစီမှုများနှင့်အခြားအချိန်ဓားပြများကိုကျွန်ုပ်တို့မုန်းပါသည်။ ဒေါက်တာ ဂျိမ်းစ်ဒော့ဘ်ဆန်ကဤနည်းကိုဤသို့ဖော်ပြသည် -“ သင်ရထားကိုလွဲချော်လျှင်သင်ဂရုမစိုက်သည့်အချိန်ရှိခဲ့သည်။ သင်ရုံတစ်လအကြာကယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ဖွင့်လှစ်ရန်ဆုံလည်တံခါးကိုသင်စောင့်ဆိုင်းနေရလျှင်မကျေနပ်မှုများတိုးပွားလာသည်။ "
သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားသောစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်စူပါမားကတ်ကုန်ပစ္စည်းတွင်သွားကြိတ်ခြင်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းအတွက်ဟေဗြဲစကားလုံးမှာ“ qavah” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ခုခုအတွက်မျှော်လင့်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းသဘောတရားတို့ပါဝင်သည်။ မိဘများသည်ခရစ်စမတ်နံနက်တွင်ထ။ လက်ဆောင်များကိုဖွင့်ရန်ကလေးငယ်များ၏မိဘများစိုးရိမ်ပူပန်နေမှုကဤမျှော်လင့်ချက်ကိုဖော်ပြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီမျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီနေ့အဓိပ္ပာယ်ပျောက်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အလုပ်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်” နှင့်“ မနက်ဖြန်မိုးမရွာဘူးလို့မျှော်လင့်တယ်” စသည့်အရာများကိုပြောကြသည်။ သို့သော်ထိုမျှော်လင့်ချက်သည်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည်။ မျှော်လင့်ချက်ဟူသောကျမ်းစာအယူအဆသည်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့တစ်ခုခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
Vor vielen Jahren verbrachte ich einige Tage mit Wandern in den Bergen von Drakensburg (Südafrika). Am Abend des zweiten Tages schüttete es aus Eimern und als ich eine Höhle gefunden hatte, war ich pudelnass und meine Streichholzschachtel war es auch. An Schlaf war nicht zu denken und die Stunden wollten nicht vorüber gehen. Ich war müde, durchgefroren und konnte es gar nicht abwarten, dass die Nacht zu Ende ging. Habe ich daran gezweifelt, dass die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgehen würde? Natürlich nicht! Ich habe ungeduldig auf erste Zeichen eines Sonnenaufgangs gewartet. Um vier Uhr morgens zeichneten sich die ersten Lichtstreifen am Himmel ab und das Tageslicht brach an. Die ersten Vögel zwitscherten und ich war sicher, dass meinem Elend bald ein Ende gesetzt würde. Ich wartete mit der Erwartung, dass die Sonne aufgehen und ein neuer Tag anbrechen würde. Ich wartete darauf, dass die Finsternis dem Licht weicht und die Kälte durch die Wärme der Sonne ersetzt wird (Psalm 130,6) Sicherheit Erwartung Vorfreude Durchhalten Freude. Genau darum geht es beim Warten im biblischen Sinn. Aber wie wartet man eigentlich? Wie harrt man des Herrn? Machen Sie sich bewusst, wer Gott ist. Sie wissen es!
Der Hebräerbrief beinhaltet einige der ermutigendsten Worte der Bibel über das Wesen Gottes: „lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt: »Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen«“. (Hebräer 13,5). Laut griechischer Experten wird diese Passage übersetzt in die Worte „Ich werde dich nie, nie, nie, nie, NIEMALS verlassen.“ Was für ein Versprechen unseres liebenden Vaters! Er ist gerecht und er ist gut. Was lehrt uns nun der Vers aus Sprüche 20,22? Trachte nicht nach Rache. Warte auf Gott. Und? Er wird dich erlösen.
ရန်သူအတွက်အပြစ်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတာမင်းသတိထားမိလား။ သင်၏ကယ်တင်ခြင်းသည်အဓိကကျသည်။ သူသည်သင့်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ ဒါကကတိပဲ! ဘုရားသခင်ကဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သူဟာအရာတွေကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်စေလိမ့်မယ်။ သူကသူ့အချိန်နှင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်ကရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်။
ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားအရာရာတိုင်းကိုလုပ်ဆောင်ပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာနေထိုင်သင့်သည်။ တို့တစ်တွေခွင့်လွှတ်ရင်ခွင့်လွှတ်ရမယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုထိပ်တိုက်တွေ့သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်မေးခွန်းထုတ်ရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့လည်းအလားတူပင်။ ယောသပ်သည်ထာဝရဘုရားကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော်လည်းစောင့်ဆိုင်းရင်းသူတတ်နိုင်သလောက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏အခြေအနေနှင့်သူ၏အလုပ်အပေါ်သူ၏သဘောထားကရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းသောအခါ passive မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းရန်နောက်ကွယ်မှလုပ်ဆောင်သည်။ သို့မှသာသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒများ၊
စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်မျှော်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ သူထင်ထားတာထက်ကွဲပြားခြားနားတာကိုသူမြင်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ သူ၏လုပ်ရပ်များသည်သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားလိမ့်မည်။ သင်၏နာကျင်ခြင်း၊ အမျက်ဒေါသ၊ ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ လက်စားချေမရှာပါနဲ့ လက်ျာဘက်၌တရားစီရင်တော်မူပါစေသော။